एकै दिन २२६मा कोरोना पुष्टि, कहाँ कति संक्रमीत भेटिए ? - The Divine News एकै दिन २२६मा कोरोना पुष्टि, कहाँ कति संक्रमीत भेटिए ? - The Divine News
नेपालमा आज थप २२६ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
कैलाली १४ तथा अछाम, बैतडी, डोटी र कञ्चनपपुरमा ११ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ । यस्तै भेरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा बाँकेका ७ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ ।
हालसम्म ५९ जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।रातो पाटी
‘रामकहानी’ मा ह्याट्रीक सङ्गै दर्शकको माया पुजालाई